Inona no atao hoe plagiarisme amin'ny lahatsoratra - Victor Mochere
Mety ho gaga ianao raha mahafantatra fa na ny mpianatra media aza dia tsy tia asa an-tsoratra. Mazava ho azy fa misy ankizilahy sy ankizivavy vonona ny handany andro aman’alina mba hitady ny teny tsara indrindra hilazana ny eritreriny na ny heviny. Na izany aza, ny ankamaroan'ny mpianatra dia tsy mpankafy lahatsoratra sy taratasy fikarohana. Misy antony maromaro tsy tian'ny mpianatra manoratra lahatsoratra. Ny mahazatra indrindra amin'izy ireo dia ireto manaraka ireto:
Mandany fotoana be izany – Misavoritaka be ny mieritreritra fa ny fanoratana lahatsoratra dia tsy midika afa-tsy ny fanoratana. Eo ihany koa ny fanangonana, famakafakana ary fanodinana vaovao. Raha ny momba ny fanoratana taratasim-potoana na ny disertation dia mety haharitra herinandro maromaro vao hita ny angon-drakitra ilaina rehetra
Tokony hanana fahalalana lalina amin'ny lohahevitra maro ianao - Tokony hojerena tsara ny zava-misy rehetra. Zava-dehibe indrindra ny fampiasana fampahalalana mifandraika amin'izany. Ankoatr'izay, tokony hialana amin'ny fitsipi-pitenenana, ny tsipelina ary ny fahadisoana lojika ao amin'ny lahatsoratra ianao
Mety mankaleo izany – Tsy mety ny tsy tia asa voafaritra. Ny olona iray dia tsy mpankafy ny siansa marina ary ny tarehimarika dia afaka mampanadala azy. Ny hafa dia mihevitra ny fanoratana asa ho mankaleo
Ny taratasy rehetra dia dinihina tsara - Raha heverinao fa tsy manamarina ny lahatsoratrao ny mpampianatra dia diso ianao. Ankoatra izany, manana traikefa be dia be ny mpanara-maso. Izy io dia mamela azy ireo hamaritra na lahatsoratrao manokana io na nosoratanao fotsiny miaraka amin'ny fanampian'ny fomba "copi-paste" malaza.
Ny fisavana plagiarisme dia tsy maintsy atao - Amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy atao ny fisavana plagiarisme
Be dia be ny adihevitra sy adihevitra momba ny teboka farany. Noho ny fivoaran'ny teknolojia dia nanjary mora sy tsotra ny manamarina ny disertation, ny fe-potoana, na ny lahatsoratra momba ny plagiarism.
Plagiarism: inona izany?
Fanamarinana ny plagiarisme: Ahoana no hanaovanao izany
Fiatrehana olana mety hitranga: Torohevitra mahasoa ho an'ny mpianatra
Ny teny hoe "plagiarism" dia somary misavoritaka. Mpianatra maro no mahatakatra fa tsy azo atao ny mampiasa izay fampahalalana omena amin'ny loharano hafa. Noho izany dia tsy azon'izy ireo fotsiny ny fomba fanoratana lahatsoratra iray manan-danja sy marina nefa tsy mampiasa loharanom-baovao. Izany no antony maha-zava-dehibe ny manazava ny tena dikan'io teny io. Ny plagiarism dia ny fampiasana ny ampahany amin'ny fampahalalana tsy misy ny loharano. Midika koa izany fangalarana hevitra na eritreritry ny hafa. Ilaina ny manamarika fa misy karazana plagiarism maro.
Ny karazana manerantany dia midika fa mandika fotsiny ny lahatsoratra manontolo ianao ary tsy manova na inona na inona. Ny karazana mosaika dia midika fa mahita lahatsoratra maromaro ianao, mandika fehintsoratra avy amin'izy ireo, ary mamorona lahatsoratrao manokana. Raha heverinao fa miavaka ny taratasy efa vonona, dia diso ianao. Ny karazana plagiarisme manaraka dia antsoina hoe incremental. Midika izany fa mamorona lahatsoratra tany am-boalohany ianao fa manisy fehezan-teny plagiarized ao anatiny. Matetika no mitranga izany raha toa ka tsy voatanisa amin'ny fomba tsara ianao.
Ny karazana farany dia ilay antsoina hoe plagiarisme. Midika izany fa mamerina manoratra ny asanao manokana ianao. Raha ny marina, ny fepetra takian'ny maha-tokana dia mety tsy mitovy amin'ny oniversite mankany amin'ny oniversite. Tsara raha afaka mamorona votoaty 100% ianao. Na izany aza, ilaina ny mitadidy fa ny citations dia tsy maintsy atao amin'ny ampahany betsaka amin'ny taratasy akademika. Noho izany, matetika, ny lahatsoratra dia tsy afaka ny ho miavaka tanteraka. Ny isan-jaton'ny plagiarism dia mety miovaova amin'ny 10 ka hatramin'ny 25%. Tokony hanazava ity olana ity ianao any amin'ny oniversite na oniversite anao.
Amin'izao fotoana izao, ny mpianatra tsirairay dia manana fahafahana tsara hanamarina ny asany ho an'ny plagiarism alohan'ny hizarana izany amin'ny mpampianatra. Betsaka ny fampiharana azo tratrarina sy takatry ny saina izay mahatonga ity dingana ity ho tena tsotra. Tsy maintsy mandika ny lahatsoratrao fotsiny ianao, mametaka azy amin'ny programa ilaina, ary miandry ny valiny. Raha tsara ny vokatra azonao dia tsara izany, azonao atao ny mizara ny andraikitrao. Na izany aza, raha toa ny taratasinao dia misy isan-jaton'ny plagiarism mihoatra noho izay azo atao, dia mila manova ny lahatsoratra ianao. Ny ankamaroan'ny mpitsikilo plagiarism an-tserasera dia mampiseho ny sarin'ilay asa voamarika ho plagiarism. Ny lisitr'ireo mpitsikilo plagiarism maimaim-poana sy karamaina dia ahitana ireto rindrambaiko manaraka ireto:
Copyleaks - Manohana endrika rakitra isan-karazany sy fiteny maro izy io. Tsara ho an'ny votoaty an-tserasera. Afaka mampiasa azy maimaim-poana ianao
Scribbr - Ity programa ity dia azo itokisana. mitanisa ireo loharano mifanandrify rehetra. Scribbr dia iray amin'ireo fitaovana mahomby indrindra amin'ny fisavana plagiarisme. Tsy maimaim-poana anefa izany
Grammarly - Manana interface tsara ho an'ny mpampiasa izy io. Ny programa dia afaka manitsy ny lesoka ihany koa. Na izany aza, tsy maintsy mandoa seky plagiarisme ianao
Plagscan - Iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra amin'ny fanoratana akademika. Manodidina ny $5 isam-bolana fotsiny dia mahazo fotoana mahafinaritra hanamarinana ny taratasinao ho an'ny plagiarism tsy misy ezaka
Unicheck - Mahita lahatsoratra dika mitovy amin'ny fotoana fohy
Na tianao na tsy tianao fa tsy maintsy manome taratasy maro tsy misy plagiarism ianao mandritra ny fianarana eny amin'ny oniversite. Manana fomba roa hivoahana ianao. Ny voalohany dia midika fa mahafehy ny fahaizanao manoratra ianao ary vonona ny handany ora maro amin'ny fanomanana ireo taratasy mifandraika, marina ary tsy misy plagiarisme. Ny fivoahana faharoa dia midika ny fampiasana serivisy an-tserasera manokana izay vonona hanoratra taratasy ho anao. Ao amin'ny tranokala www.domyessay.net, azonao atao ny mametraka ny kaomandy ho an'ny lahatsoratry ny haavon'ny fahasarotana rehetra.
Ireo mpanoratra mahay sy za-draharaha dia vonona hanampy anao hiatrika ireo karazana taratasy samihafa. Miara-miasa amin'ny mpanoratra be dia be ny sehatra. Miresaka lohahevitra sy lohahevitra isan-karazany izy ireo. Mba hahazoana ny asa vonona haingana araka izay azo atao, dia tsy maintsy manaraka fitsipika tsotra. Noho izany, tsara kokoa ny mametraka baiko haingana araka izay azo atao. Alefaso ny toromarika amin'ny antsipiriany mba hisorohana ny tsy fifankahazoana sy ny fisafotofotoana. Anjaranao ny mametraka fe-potoana. Tokony handanjalanja anefa izy ireo.
Ny tolotra dia takatry ny mpianatra tsirairay. Ankoatra izany, fantatrao foana ny vola aloanao. Noho izany, raha ny momba ny fanoratana akademika, ny plagiarism dia tsy misy fanontaniana. Tsy maintsy mahay manoratra taratasy tsara kalitao mifanaraka amin'ny fitsipika sy tolo-kevitra rehetra ianao. Hevitra tsara ny manankina asa fanoratana amin'ireo matihanina izay vonona ny hanome anao ny andraikitra amin'ny kilasy A faran'izay haingana.
Ahoana ny fomba hahatratrarana ny fifandanjana eo amin'ny asa sy ny fiainana mandritra ny freelancing